Woqooyiga Kuuriyada oo hakisay tijaabada hubka niyuklerka – Radio Muqdisho
Dowladda Kuuriyada waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay si dhaqso ah u hakineyso tijaabaada nukleyrka iyo gantaalada, isla markaana ay albaabada isugu dhufaneyso xarunta tijaabada ee Nukleyrka.
Hogaamiye Kim Jong-Un ayaa waxaa kale oo uu xusay in aysan muhiim aheyn tijaabo kale oo dheeraad ah,waxaana hadaladaasi imaanayaan xilli ay socdaandadaal ku aadan kulan dhexmara madaxweynayaasha dalalka Kuuriyada Koonfureed ,Mareykanka iyo hogaamiyahasi.
Afhayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa tallaabadani ay qaaday xukuumadda Pyongyang ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horay loo qaaday, loogana dan leeyahay baabi’inta hubka Nukleyrka ee gacanka Kuuriya.
Xukuumadda Seoul ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in arrintani ay jawi wanaaagsan u horseedi doonto wadahadalada labada dal dhexmari doona, hasayeeshe dowladda Japan ayaa sheegtay in iyadoo tani ay jirto, hadana cadaadiska marnaba aan laga dabcin dalkaasi.
Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa soo dhaweeyay tallaabadan ay qaaday xukuumadda Pyongyang.